फुर्सदिला सिईओहरू, को के गर्दै ? | Kendrabindu Nepal Online News
11779549 541739 4462848 6774962
फुर्सदिला सिईओहरू, को के गर्दै ?
१३ चैत्र २०७६, बिहीबार १७:१४
हरेकदिन बिहान उज्यालो भएदेखि राती अबेरसम्म व्यस्त रहने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) हरु यतिबेला फूर्सदिला भएका छन् ।
बढी व्यस्तताका कारण आफ्नो परिवारलाई समेत राम्रोसँग समय दिन नभ्याउने बैंकका सिइओहरु यतिबेला आफ्नो परिवारलाई राम्रोसँग समय दिन भ्याएका छन् । सरकारले गत मंगलबारदेखि एक हप्ताका लागि मुलुकै भरी लकडाउन गरेपछि बैंकका सिमिति शाखा मात्रै खुलेका छन् । जसका कारण बैंकका सिइओहरु पनि फुर्सदिला भएका हुन् ।
होम क्वारेन्टाइनमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठले आफ्नो दिनचर्यालाई तीन भागमा बाँडेका छन् । पहिलो बैंकका प्रदेश कार्यालयमा आउने समस्याहरुलाई डिल गर्ने, दोस्रोमा कार्यालयमा पेन्डिङमा रहेका काम गर्ने र तेस्रोमा आफ्नो परिवारलाई समय दिने । ‘पहिलेको तुलनामा हामी फुर्सदिला भएका छौँ, केटाकेटीलाई समय दिन पाइएको छ ।’ सिइओ श्रेष्ठले भने । यतिबेला बैंकहरुले कम कर्मचारी राखी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् भने अधिकांश कर्मचारी विदामा छन् ।
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन धेरै जसो समय समाचार हेरेर बिताउँछन् । ‘काम छैन, समाचार हे¥यो बस्यो ।’ सिइओ शेरचनले केन्द्रबिन्दुसँग भने । त्यसका साथै परिवारलाई समय दिएर पनि समय काट्ने गरेको सिइओ शेरचनले बताए । बिहानै देखि व्यस्त हुनेलाई समय कटाउन भने गाह्रो हुने उनले सुनाए । तर जटिल रोगको महामारी भएकाले सबैले सतर्कता अपनाउनै पर्ने शेरचनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, एमएबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीलाई पनि समय बिताउन गाह्रो भएको छ । तर रोगसँग लढ्न सरकारले गरेको लकडाउनलाई साथ दिएको उनले बताए । दैनिक रुपमा आउने गरेका समाचार हेर्ने, परिवारजनलाई समय दिँदै दैनिकी बित्ने गरेको उनले बताए । पहिले भन्दा फूर्सदिलो भएपनि चुनौती भने थपिएको सिइओ केसीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले पनि डिजिटल माध्यममा बढी व्यस्त भएको बताइन् । ‘यो २÷३ दिन कम्प्युटर र मोबाइलमा व्यस्त भइएको छ ।’ सिइओ खुञ्जेलीले भनिन् । कम्प्युटरबाट बैंकका कुन कुन शाखा खोल्ने , कहाँ कहाँ खोल्ने लगायत बैंकर्स संघमा सरसल्लाह गर्ने काम गर्दै खुञ्जेलीका दिन बित्ने गरेका छन् । हिजो अस्तिका दिनहरुमा भन्दा आज केही फूर्सद भएको उनले सुनाईन् ।
अर्याल केन्द्रबिन्दु डट कमका अर्थ ब्यूराे प्रमुख हुन् । विगत एक दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय उनले नवतलास मासिक, रााष्ट्रिय पथ साप्ताहिक, व्यापार साप्ताहिक, नेपाल समाचारपत्र, राजधानी दैनिक र क्यापिटल नेपाल डट कममा काम गरेकाे अनुभव छ । उनी आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)की कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
covid19, फुर्सदिला बने, बैंकका सिईओ
Prevक्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा किन बस्ने ?
चैत मसान्तसम्म जीवन बिमाको प्रिमियम नउठाउन बिमा समितिको निर्देशनNext
कतारमा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुने बढ्दै
आज निको हुनेहरु थपिए ६८८ जना, संक्रमितको संख्या २०४
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या सात लाख नाघ्यो, मृत्तक कति ?
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचाररत ७ जनामा कोरोना पुष्टि
सङ्क्रमण दर ओरालो : २४ घण्टामा ६८८ जना ‘डिस्चार्ज’, चार जिल्ला कोरोना ‘फ्री’
अल्फाबिटामा ब्रिजकोर्स कक्षा अनलाईन माध्यमबाट सुरु
२८ औँ आईजीपीमा शैलेश थापा नियुक्त
विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्किन अमेरिकी सरकारको निर्देशन
एनआईसी एशिया बैंकका ऋणीलाई व्याज छुटको आर्कषक योजना
कोलकाताका महावाणिज्यदूत र चेम्बरका पदाधिकारीवीच भेटवार्ता